Horudhac: Man United vs Chelsea… (Red Devils oo 41-sano kaddib saddex kulan oo xiriir ah horyaalka lagu garaaci karo garoonkeeda) – Gool FM
(Manchester) 24 Okt 2020. Manchester United ayaa caawa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhoweyn doonta kooxda ay xafiiltamaan ee Chelsea, ciyaar ka qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Man Utd waxa ay maanka ku haysaa in kulankan haddii ay garaacdo Blues ay ka sare mari doonto dhibco ahaan.
Red Devils ayaa kulankan baasanaysa iyadoo guul weyn ka soo qaadatay PSG tartanka Champions League markii ay ku booqatay magaalada Paris, halka Chelsea ay barbaro goolal la’aan ah la soo gashay Sevilla.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 07:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Edinson Cavani ayaa loolan ugu jira inuu safto kulankiisii ugu horreeyay ee Manchester United iyo kulankiisii ugu horreeyay ee horyaal ah tan iyo markii uu ka soo muuqday Paris Saint-Germain bishii Febraayo.
Harry Maguire iyo Mason Greenwood ayaa diyaar u ah kulankan, laakiin Anthony Martial ayaa ganaaxan oo kaarka cas ku maqan, halka Eric Bailly laga yaabo inuu dhaawac muruqa ah garoomada kaga maqnaado muddo afar todobaad ah.
Goolhayaha Chelsea ee Kepa ayaa dhaawac garabka ah garoomada kaga maqnaan doono, xiddiga kale ee kaliya ka maqan Blues waa Billy Gilmour.
Hakim Ziyech ayaa safka hore ku soo bilaaban kara kulankiisii ugu horreeyey kaddib markii uu labo kulan bedel ku soo galay.
>- Manchester United ayaa guuleysan karata saddex kulan oo xiriir ah oo ay wajaheen Chelsea markii ugu horreysay tan iyo bishii September sanadkii 1965-kii, markaasoo ay ka hoos ciyaarayeen Sir Matt Busby.
>- Chelsea ayaa guul la’aan ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Premier League booqdeen Manchester United, waxaana ay kala soo kulmeen 4 barbaro iyo 3 guuldarro, waana heerkii ugu dheeraa oo ay guul ku la’yihiin garoonka Old Trafford tan iyo markii 16 kulan oo xiriir ah ay ku soo badin waayeen garoonkan intii u dhexeysay bishii September ee sanadkii 1920 iyo January 1957.
>- Manchester United ayaa khasaaro la kulmi karta saddexdeeda kulan ee furitaan oo ay horyaalka ku ciyaarayaan garoonkooda kaliya markii labaad taariikhdooda, markii ugu horreysay waxay ahayd sanadkii 1930-kii, markaasoo ay ku dhammaysteen kaalimaha hoose ee horyaalka.
>- Man United markii ugu dambeysay oo ay saddex oo xiriir ah guuldarro la kulanto horyaalka iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda Old Trafford, waxay ahayd bishii Febraayo sanadkii 1979-kii.
>- Marcus Rashford ayaa dhaliyey afar gool saddexdiisii kulan ee uu wajahay Chelsea tartammada oo dhan, waxaana ku jira labadii gool ee uu ka dhaliyey xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Chelsea ayaa barbaro gashay afar ka mid ah siddeedeedii kulan ee tartammada oo dhan ay ciyaartay xilli ciyaareedkan, waxaana ay afarta kulan ay haysataa 3 guul iyo 1 guuldarro.
>- Chelsea ayaa dhalisay ugu yaraan saddex gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda horyaalka Premier League.
>- Kooxda Chelsea ayaa laga dhaliyey ugu yaraan labo gool 5 ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaareen horyaalka Premier League (Away).
Horudhac: Liverpool vs Sheffield United… (Reds oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kulanka caawa ka dhacaya Anfield)